Ndakasvirwa ndakanyatsovhura makumbo mboro ikanyatsopinda apa achiyamwa matits angu! - Masasi eHarare
DzeBonde Ndakasvirwa ndakanyatsovhura makumbo mboro ikanyatsopinda apa achiyamwa matits angu!
Ndakasvirwa ndakanyatsovhura makumbo mboro ikanyatsopinda apa achiyamwa matits angu!
Akandirarisa pasi ndokubva atanga kundikisa muhuro umu, ndokudzika ndokutanga kundiyamwa mazamu, akadzika kuzasi ndokundinanzva dumbu rese then back kumazamu, akandishadaburisa makumbo ndokutanga kutsunyirira matits angu, achiyamwa as well apa aiyita mazamu ekuchinjanisa one by one.
Ndaiita kuona nyeredzi masasi nekunakirwa apa beche raiita kudurura juice dziya by that time, akadzikisa ruoko one ndokunonamatira pamatinji apa rurimi ngarutange kutamba nemazamu achiyamwa hake achimborumirira tuminyatso apa ari busy kupuruzira kabhinzi, masasi ndakatanga kupindwa nechando miri wese kumerera mapundu, ma goose bumps ndikashaya kuti chii chirikuitika, handisati ndakamboitwa like this in my life.
Ndaida kuridza mhere nekunakirwa asi ndakambozvibata, by this time ndanga ndaakukoirira chigunwe chake change zvino chichitsvedzerera chiri pamsoro pekabhinzi kangu. Svira Max kani babe please, ummmmm, ndakadaro ndichimama nekunakirwa, eish shaa ndiisewo kani ndanzwa ini ndakunatsonzwa kuda kuiswa daddy kani please what do you want me to do kaaaaani iiiiiiiiiiiiiii, usadaaaaaaaaaro ahhhhhh, ndakapotsa ndatunda paakarumirira munyatso wangu.
Ndakazonzwa manje munhu ava pamusoro, ndokubva aisa mboro yake iyo yakachecheudzwa apa inenge ichinatsopisa kunge irikubva mumoto, nxaa regai inake hayo mboro iyoyo, eish, ndikaifunga chero kunyora ndingatorega ndikanotsvaga Max ambondisvira futi.
Auya pamusoro akaiisa zvinyoro nyoro, ndokutanga kukoira manje zviri very soft achiita kuti inyatsopinda yese usafunga kuti anorega kuyamwa matits coz aakusvira aiwa, he is very good at multi tasking, apa arikukoira apa arikuamwa mazamu, akazoti manje yanyatsopinda yese ndokutanga kundikoira, asikana ndakasvirwa apa ndainge zvino ndanyatsovhura makumbo mboro yakanyatsopinda yese kuita kunyura zvekuti ndakatombofunga kuti pamwe machende anyura futi, coz kunaka kwaiyita mboro iyoyo hakusi kwepano pasi mhani.